Posted by Tranquillus | Déc 17, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Faahfaahin iyo warqad qaab bilaash ah oo loogu talagalay soo celinta kharashaadkaaga xirfadeed. Dhamaantood waxay ku bixiyaan howlgalo aad adigu leedahay. Baahiyaha iyo waxqabadyada ganacsigaaga waa masuuliyadiisa. Sharciga shaqadu wuxuu bixiyaa, ha ahaato soo bandhigida dukumiintiyada taageeraya ama qaab gunno ah, in lagugu soo celin doono lacagtii aad hore u soo marisay. Si kastaba ha noqotee, nidaamka daaweynta mararka qaarkood wuxuu noqon karaa mid xanuun badan oo waqti badan qaadanaya. Sidaa darteed adiga ayay u taal adiga inaad is abaabusho oo aad hubiso inaad lacagtaada dib u hesho. Fursad yar baa jirta in kuwa kale adiga kaaga walwalaan.
Maxay yihiin noocyada kala duwan ee kharashyada ganacsiga?
Waqti ka waqti ayaa lagaa qaadi karaa kharashyada ganacsiga inta aad ku guda jirto shaqadaada. Kuwani waa kharashyada lagama maarmaanka ah ee ay tahay inaad hormariso inta lagu guda jiro gudashada waajibaadkaaga oo la xiriira waxqabadka waxqabadkaaga. Inta badan warbixinnadan kharashka waxaa mas'uul ka ah shirkadda.
Kharashaadka loogu yeero xirfadleydu waxay qaadan karaan dhinacyo kala duwan, oo ay ugu muhiimsan yihiin:
Kharashka gaadiidka: markaad ku safreyso diyaarad, tareen, bas ama taksi hawlgal ama u aado kulan xirfadeed;
Kharashka masaafada: haddii shaqaaluhu u adeegsado gaarigiisa safar ganacsi (oo lagu xisaabiyo masaafada masaafada ama habeennada hudheelka);
Qiimaha cuntada: qadada ganacsiga;
Qiimaha dhaqdhaqaaqa xirfadeed: wuxuu kuxiranyahay isbedelka booska kaasoo u horseedaya isbadal goobta degenaanshaha.
Waxa kale oo jira:
Qiimaha isticmaalka qalabka NTIC (macluumaadka cusub iyo teknoolojiyada isgaarsiinta),
Sidee ayaa loo bixiyaa kharashyada xirfadeed?
Nooc kasta oo ay ahaato kharashaadka dhacay, shuruudaha iyo shuruudaha soo celinta kharashyada waxay qaadan karaan laba qaab. Ama waxaa lagu siiyay qandaraaska shaqada, ama waxay qayb ka yihiin dhaqan ka jira shirkadda.
Bixinta waxaa lagu bixin karaa iyadoo toos loo bixiyo kharashka dhabta ah, yacni dhammaan lacagaha la bixiyay. Kuwani waxay khuseeyaan kharashyada shaqada, isticmaalka aaladaha ICT, dhaqdhaqaaqa mihnadeed, ama kharashaadka ay galaan shaqaalaha dibedda ku dhajiya. Sidan oo kale, shaqaaluhu wuxuu u wareejiyaa shaqabixiyeyaashiisa warbixinnadiisa kharashka badan. Hubinta inaad haysato ugu yaraan saddex sano.
Waxa kale oo suurtagal ah in lagu siiyo lacag marmar ama xilli-xilli ah magdhaw ah. Qaabkan waxaa loo qaatay kharashyada soo noqnoqda, tusaale ahaan wakiil ganacsi. Xaaladdan oo kale, kan dambe kuma qasbana inuu caddeeyo kharashkiisa. Saqafyada waxaa dejiya maamulka canshuuraha waxayna ku kala duwan yihiin nooca kharashyada (cuntada, gaadiidka, deganaanshaha ku meel gaarka ah, ka saarista, gunooyinka masaafada). Si kastaba ha noqotee, haddii xadka la dhaafay, loo-shaqeeyaha wuxuu u baahan karaa dukumintiyadaada taageeraya. Waa in la ogaadaa in agaasimayaasha shirkadu aysan xaq u lahayn gunadan go'an.
Nidaamka dalbashada dib u bixinta kharashyada xirfadeed
Sida caadiga ah, dib u bixinta qarashaadkaaga xirfadeed waxaa la sameyn doonaa ka dib marka aad u dirto dukumintiyada taageeraya waaxda xisaabaadka ama maareeyaha shaqaalaha. Hadhaagga ayaa sida caadiga ah ka soo muuqan doona warqaddaada mushaharka ee xigta iyadoo lacagta loo gudbin doono koontadaada.
Waxaad haysataa 3 sano oo aad gacantaada ku bixin karto si aad u bixiso caddaynta kharashyadaada xirfadeed oo markaa laguu soo celiyo. Wixii intaa ka dambeeya, maamulahaagu waajib kuma aha inuu iyaga bixiyo. Haddii si khalad ah ama aan iloobo ama sabab kasta oo aynaan lacagtaada u soo celin. Runtii way fiicantahay inaad si deg deg ah wax uga qabato adoo u diraya warqad codsi magdhow ah meheraddaada.
Si laguu caawiyo, waa kuwan laba warqadood oo muunad ah oo lagu codsado. Si kastaba ha noqotee. Iskusoo wada duuboo, hubi inaad ku lifaaqdo dukumiintiyada asalka ah ee taageeraya oo nuqullo kuu hayso naftaada.
Tusaale warqad codsi caadi ah oo ku saabsan dib-u-bixinta kharashyada xirfadeed
Ujeeddo: Codsi u-celinta kharashyada xirfadeed
Aniga oo raacaya kharashaadkii igu dhacay intii aan socday hawlgalkeygii ugu dambeeyay. Haddana waxaan doonayaa inaan ka faa'iideysto dib u bixinta qarashkeyga xirfadeed. Waxaan halkan kuugu soo dirayaa liiska lacag-bixinta oo dhameystiran si waafaqsan nidaamka.
Marka waxaan safar ka bilaabay _____ (meesha laga baxayo) ilaa _____ (meesha loo socdo safarka ganacsiga) laga bilaabo ________ ilaa _____ (taariikhda safarka) si aan uga soo qeyb galo shirar dhowr ah oo muhiim u ah horumarka shirkadeena. Waxaan halkaa ka raacay diyaarad halkaas iyo dib ugu noqosho intii aan safarka ku jiray waxaanan raacay taksiyo dhawr ah.
Kharashaadkaas ka sokow, kharashka hoyga ee huteelka iyo kharashka cuntadayda waa lagu daray. Dukumiintiyada taageeraya ee caddaynaya dhammaan tabarucaadayda waxay ku lifaaqan yihiin codsigan.
Anigoo sugaya jawaab wanaagsan, waxaan kaa codsanayaa inaad hesho, Mudane, salaan xushmad leh.
Tusaale warqad codsanaysa in dib loo bixiyo kharashyada mihnadeed haddii ay dhacdo diidmada loo shaqeeyaha
Ujeeddo: Sheegasho dib-u-bixinta kharashyada xirfadeed
Iyada oo ka mid ah waajibaadyadayda, waxay noqotay inaan safaro shaqo oo dhawr ah dibadda u aado. Shaqaale ahaan [hawl ahaan], waxaan aadey [ujeedo] 4 maalmood hawlo gaar ah oo laxidhiidha booskayga
Aniga oo rukhsad ka haysta maareeyaha khadkayga, waxaan ku safray gaarigayga. Waxaan socdaalay wadar dhan [lambar] kiiloomitir ah. Tan waxaa lagu darayaa qiimaha cuntada iyo dhowr habeen oo hoteelka ah, wadar ahaan qadar [qadar] euro ah.
Sharcigu wuxuu dhigayaa in kharashyadan xirfadeed ay tahay inay bixiso shirkadda. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo xaqiiqda ah in dhammaan dukumintiyada taageeraya ee muhiimka ah la siiyay waaxda xisaabaadka markii aan soo noqday, weli ma aanan helin lacag-bixintii la xiriirtay illaa maanta.
Tani waa sababta aan kaaga codsanayo inaad soo faragaliso si laygu soo celiyo sida ugu dhakhsaha badan. Waxaad ka heli doontaa nuqul ku lifaaqan dhammaan qaansheegta oo qiil u sameynaya codsigeyga.
Inta aan kaaga mahadcelinayo kaalmadaada, waxaan kaa codsanayaa inaad aaminto, Mudane Agaasime, hubaasha tixgelinta ugu sareysa.
Soo dejiso "Muunad-warqad-ah-oo-caadi-ah-codsi-ah-u-celinta-kharash-xirfadeed.docx"	Tusaale-warqad-ah-oo-caadi-ah-codsi-ah-u-celinta-kharashka-xirfadeed.docx - Waa la soo degsaday 4586 jeer - 21 Kb
Download "Muunad-warqad-loogu-celinayo-kharashka-xirfad-yaqaan-ee-diidmada-loo-shaqeeyaha.docx"	Tusaale-warqad-ah-oo ah-codsi-ah-celin-ah-kharash-mihnadeed-ah-kiis-diidmo-ah-loo-shaqeeyaha.docx - Soo degsaday 4557 jeer - 13 Kb
Template warqad: codso magdhowga kharashyada xirfadeed Janaayo 8th, 2022Tranquillus
horeXaq miyaan u leeyahay in aan dib u dhigo wareysiyada xirfadeed sanadka 2021 aniga oo aan la i ganaaxin?
socdaCiidaha iyo maalmaha nasashada: suurtagalnimada in lagu soo rogo oo wax laga beddelo taariikhdooda illaa Juun 30, 2021